စွမ်းအင်စနစ်အိမ်တွင်းစပီကာ 8 Lounge ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ယေဘုယျ, reviews
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်မှုများစွာပြုလုပ်နေပြီးစမ်းသပ်ထုတ်ကုန်များကိုမရပ်တန့်တော့ပါ။ နောက်ထပ်တစ်ခါ စွမ်းအင်စနစ်၏လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ငါတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအိမ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုအားစမ်းသပ်ရန်လုံလောက်သည် ယခုအချိန်တွင်အရှိဆုံးစွယ်စုံနှင့်အစွမ်းထက်အသံ, စွမ်းအင်စနစ် မူလစာမျက်နှာ Speaker 8 Lounge.
Energy Sistem အကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဂီတ၊ အသံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြောင်းအမြဲပြောကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင့်အိမ်ကိုယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအသံနှင့်တပ်ဆင်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဖော်ပြသင့်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစပီကာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းသင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်၎င်းကိုယူနိုင်သည်။
1 အိမ်အတွက်စွမ်းအင်စနစ်စပီကာ 8 Lounge စံပြ
2 Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge ၏ဒီဇိုင်း
အိမ်အတွက်စွမ်းအင်စနစ်စပီကာ 8 Lounge စံပြ
ကျနော်တို့အများကြီးထုတ်ကုန်စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ Energy Sistem မှာငါတို့သူငယ်ချင်းများကနေ။ ၎င်းတို့တွင်နားကြပ်များသို့မဟုတ်စပီကာများကဲ့သို့သောကြီးမားသောထုတ်ကုန်များစာရင်းရှိသည်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောကြိုးစားနေကိုချစ်၏ အသံလွှင့်စင်များ, စပီကာ၏လိုင်းများတလျှောက်တွင်နည်းနည်း။ ကုန်ပစ္စည်းများအမြဲတမ်းနှင့်အတူ ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကြောင်းအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှု ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်းကို။
အဆိုပါစွမ်းအင်စနစ် Home Speaker 8 Lounge သည်အထူးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ဘက်စုံ တစ်ခုတည်း device ကိုအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ နှင့်လည်းအဘို့ ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားကို ဒါကပူဇော်သက္ကာကိုနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသေးငယ်တဲ့စပီကာတစ်လုံးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကြားတဲ့အခါအဲဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။ အိမ်အပြင်ဘက်ရှိမည်သည့်အခန်းတွင်မဆိုအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်.
သင်သည်သင်၏အိမ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနေရာချနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုရှာနေသည်ဆိုပါက။ ဒါကကမ်းလှမ်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပါဝါနှင့်အသံအရည်အသွေး။ ထို့အပြင်မည်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်အလှဆင်မှုများနှင့်မတိုက်ဆိုင်ပါက Home Speaker 8 Lounge သည်သင်လိုအပ်သောအရာများနှင့်အလွန်နီးကပ်နိုင်သည်။ သင်ကကိုင်နိုင်ပါတယ် Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge လျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူအမေဇုံအပေါ်။
Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge ၏ဒီဇိုင်း
သတိထားမိဖို့အချိန်ရောက်ပြီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘယ်လိုလဲ Home Speaker 8 Lounge နှင့်ရုပ်ပုံများကိုသင့်အားပြောပြပါ။ စွမ်းအင်စနစ်သည်ဒီဇိုင်း၏ရှေ့တန်းမှအမြဲတမ်းရှိနေပြီးအရောင်အသွေးစုံပြီးရဲရင့်သောပစ္စည်းများကိုပြသသော်လည်း၊ ငါတို့အရင် ကျနော်တို့ဂန္အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ကိရိယာ။ အဲဒါရှိတယ် စတုဂံပုံသဏ္.ာန် အလွန်ကောင်းမွန်သောချောချောမွေ့မွေ့နှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုပေးသောကောင်းသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
ယင်း၏အတွက် တိုကျရိုကျ ကျနော်တို့စပီကာကိုဖုံးသော "ကင်" ကိုရှာပါ။ အခြားကုမ္ပဏီများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့နိုင်သည့်အသေးစိတ်တစ်ခုမှာစက်ပစ္စည်း၏ကျန်ကဲ့သို့အနက်ရောင်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းအနီရောင်နဲ့လည်းအိမ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေမှာပါ။ ထိုနှစ် ဦး စလုံး box ထဲမှာပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှေ့ဖုံးကိုသာတွေ့နိုင်ပေမယ့်နောက်ကွယ်မှာတော့သူတို့ပုန်းနေကြတယ် မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းအား ၆၀W ထုတ်ပေးသည့်ရှေ့ယာဉ်မောင်း ၅ ဦး အထိ.
ထဲမှာ ထိပ်ဆုံး ရှစ်ယောက်တွေ့တယ် ထိတွေ့ခလုတ်များ။ အလွန်အဆင်ပြေထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု။ ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုရှိသည် အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်တစ်ခု မီနူး ကျနော်တို့အသံ input ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်သော။ ၎င်းဘေးမှဘယ်ဘက်မှညာသို့ရွေးချယ်ရန်တေးသီချင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်ရန်နောက်ထပ်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည် ညီမျှခြင်းပုံစံ သင့်လျော်သော။
ခလုတ်၏ကျန်ဖြစ်ကြသည် ဆော့ကစား / ခေတ္တရပ်နားသည် ဂီတပြန်ဖွင့်သည်။ ရှေ့သို့သို့မဟုတ်နောက်သို့ခြေရာခံ နှင့်ထိန်းချုပ်မှု အသံအတိုးအကျယ်။ အတွက်ခလုတ်များ ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းဖြင့်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုထိန်းချုပ်သည် ဒီရွေးချယ်ထားအသံအရင်းအမြစ်လျှင်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့က၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောနှင့်အတူperfectlyုံထိန်းချုပ်နိုင်သည် အဝေးထိန်း။ သီချင်းအားလုံးပြောင်းချင်ရင်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးကုလားထိုင်ကနေထစရာမလိုတော့ဘူး။
ဝယ်ပါ Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာအမေဇုံပေါ်မှာ
ထဲမှာ နောက်ဘက် Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge ၏ထူးခြားချက်မှာကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြီးမားသည် ဖြစ်နိုင်ခြေအမျိုးမျိုး။ ဆက်သွယ်မှုသို့ ဘလူးတုသ် ၄.၁ ကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ 3,5mm jack Analog စဆိပ်ကမ်းကိုသို့မဟုတ်အခြားကိရိယာတစ်ခုမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် optical / coaxial ဒစ်ဂျစ်တယ်သွင်းအားစု။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်စရာများအဆုံးသတ်မသွားပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ကို အသုံးပြု၍ ပြန်ထုတ်နိုင်သည် ယူအက်​​စ်ဘီ နှင့်တ ဦး တည်းပင် မှတ်ဉာဏ်ကဒ်.
ပုံစံ မူလစာမျက်နှာ Speaker 8 Lounge
အသံက စတီရီယို 2.1
ဘေ့စ်ပီ 1W 20 -5လက်မ
အလယ်အလတ် Speaker များ 2W 15 - 2.75 လက်မ
ကြွေ 2W5- 1 လက်မ
ဘလူးတုသ် 4.1 လူတန်းစား II ကို
သော့ခတ်ကြိမ်နှုန်း 2.4 GHz အမြန်နှုန်း
ဒီဂျစ်တယ်ထည့်သွင်းမှု optical / coaxial
analog input ကို 3.5 မီလီမီတာအပေါက်
ယူအက်​​စ်ဘီ မှတ်ဥာဏ်များအတွက် 128 GB ကို
ရှုထောင့် 40 x ကို 24 x ကို 17
အလေးချိန် 3.9 ကီလိုဂရမ်
စြေး 99.90 €
ဝယ်ယူ link ကို Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge
အမြဲတမ်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာ Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge အကြောင်းနှင့်မည်သည့်အရာကိုနှစ်သက်သလဲဆိုတာနှင့်တိုးတက်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။ ကြောင်းကနေစတင် ကျနော်တို့ကမဟုတ်ဘဲပြည်တွင်းစက်ပစ္စည်းရင်ဆိုင်နေရသည်, အိမ်မှာ "fixed" တစ်နေရာရာမှာနေရာပိုဖို့ပိုကိုက်ညီ။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုယူနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအိမ်တွင်နေရာချထားနိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းတော့ socket အနီးတွင်ရှိသည်။
ကိရိယာတစ်ခုရှိသည် 60W ပါဝါ အိမ်မှာထောင့်တိုင်းမှာရှိတဲ့တေးသီချင်းကိုပြောရမယ်။
La အသံအရည်အသွေး ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတိကျသေချာတဲ့အသံကိုပေးတဲ့ကိရိယာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာပြတယ်။
La FM ရေဒီယို စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းပေါင်းခြင်း၊ ကြီးမားသော၊ ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည့်အသံများ၌ပင် ပို၍ ပင်အသံထွက်နိုင်သည်။
La ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာအရေအတွက် ၎င်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကဖြစ်နိုင်သမျှတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘယ်ဂီတကိုမဆိုငါတို့ဂီတကိုပြန်ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်တယ်။
ကြောင်းစပီကာဖြစ်လိမ့်မည် ဘက်ထရီမရှိပါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထူးသဖြင့်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။
Su အရွယ် ၎င်းကို "ခရီးဆောင်" ကိရိယာငယ်တစ်ခုဖြစ်စေပြီး၎င်းသည်အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းပိုဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်အတူ ပီဆို အလားတူစွာပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် piggyback သယ်ဆောင်ရန်ကိရိယာနှင့်မရင်ဆိုင်ရပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကို၎င်းကိုနေရာ ချ၍ နေရာချထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေသော AirPods Pro နှင့်အစားထိုး Huawei FreeBuds Pro